Casharkaan, waxaan ku dabooli doonnaa mowduuca saacadaha Jarmalka. Ugu horreyntii, aan tilmaanno taas si aan u dhihi karno waqtiga af Jarmal Lambarada Jarmalka Waa lagama maarmaan in la ogaado ugu yaraan lambarrada Jarmalka 1 illaa 100 si aad u wanaagsan.
Way nagu adag tahay inaan sheegno saacadaha annaga oo aan si sax ah u ogaan lambarrada Jarmalka. Lambarada Jarmalka Haddii aadan sifiican u baran, waa inaad marka hore barataa lambarada kadibna aad barataa saacadaha Jarmalka. Ma baran kartid saacado adigoon nambarada aqoon. Sidoo kale, inta aad baraneyso saacadaha Jarmalka, qofku waa inuusan u fikirin sida aan ku dhahno Turkiga. Faahfaahinta hoos ayaan ku siin doonaa. Mawduuca saacadaha Jarmalka sidoo kale waa mid aad muhiim u ah maxaa yeelay waxaa si isdaba joog ah loogu adeegsadaa nolol maalmeedka sida maadooyin kale oo badan waana in si fiican loo barto, waxay u baahan tahay in badan lagu celiyo.
Mawduuca saacadaha Jarmalka badanaa waxaa lagu daraa manhajka fasalka 9aad ee dugsiga sare waxayna u badan tahay in lagu arki doono fasalada 10aad iyo 11aad. Koorsadan, saacadaha Jarmalka, mowduucyada soo socda ayaa si faahfaahsan loo baari doonaa:
Sidee loo codsan karaa waqtiga jarmalka?
Sidee u sheegeysaa saacadaha saxda ah ee Jarmalka?
Sidee loo yiraahdaa saacadaha jarmalka?
Sidee loo sheegaa saacadaha Jarmalka iyo daqiiqad?
Casharkaan waxaan Saacadaha Jarmalka Waxaan isku dayi doonaa inaan wax ka qabanno sida ugu macquulsan. Casharkaan, waxaan ku baran doonnaa inaan ku dhahno saacado sax ah, saacado badh ah, saacadaha rubacyada iyo daqiiqadaha Jarmalka. Waxaan sidoo kale baran doonaa weydiinta iyo sheegida waqtiga ay tahay. Waxaan sidoo kale baran doonaa weedho si aan ugu sheegno saacadaha rasmiga ah iyo waqtiyada wadahadalka maalinlaha ah. Fikradda saacaddu waa aag waqti, mar labaadna boggeena Maalmaha Jarmalka maadada waa in loo barto sidii fikirka waqtiga. Sidoo kale bartayada Bilaha Jarmalka Maaddada la magacaabay waa mid ka mid ah maaddooyinka ay tahay in la barto saacadaha Jarmalka ka dib. Sidoo kale, haddii aad rabto ka dib markaad barato kuwan Xilliyada Jarmalka Waxaad sidoo kale goobjoogi kartaa goobtaada.
Si tartiib ah hadda Saacadaha Jarmalka Aynu galno mawduuceena la magacaabay.
Sidaad ogtahay, maalin waa 24 saac. Wadahadalkeena maalinlaha ah, ama sideed subaxnimo ama siddeed fiidnimo, markasta waxaan dhahnaa sideed. Markaa ma dhihin waa labaatan. Tani waa run wadahadalka maalinlaha ah. Si kastaba ha noqotee, khudbadaha rasmiga ah, tusaale ahaan, raadiyaha, telefishanka, wararka iyo warbaahinnada la midka ah, saacadda ayaa la sheegayaa, halka fiidkiina loogu yeero labaatan, waxaana loo yeeraa siddeed subaxnimo. Waxaan ku hadalnaa in ka badan 12 saacadood wadahadalka maalinlaha ah, laakiin wadahadalka rasmiga ah waxaa looga hadlaa in ka badan 24 saacadood iyo lambarada ka dambeeya 12 ayaa sidoo kale la adeegsadaa.
SIDEE AYAAD KA HELI KARTA MARKA HALKAN?
Saacadaha Jarmalka: Dhimashada Uhrzeit
Jarmal, saacadaha waxaa la weydiiyaa iyadoo la adeegsanayo qaabka soo socda.
Weydii Waqtiga Jarmalka
2. Wieviel Uhr ist es?Wie spät ist es? iyo Wieviel Uhr ist es? astaamaha su'aalaha ee german Waqtigee ayay tahay? Waxay ka dhigan tahay. Waad isticmaali kartaa labada qaab, labaduba waa isku mid.
Jarmalka, saacadda ayaa la waydiiyaa habkan.
Sida aad arki karto, jumladahan jarmalka ah ee Ingiriisiga ah Waa maxay waqtiga? ve Waa maxay wakhtiga ay tahay? su'aashu waxay keeneysaa isku mid ah.
Macluumaad dheeraad ah sida waxa loola jeedo in erayada Warqad späten ah, sida in la yidhaahdo, haddii ay dhacdo iyo keyboard tani ma yihiin saaxiibo macluumaad dhamaystiran sida qori kartaa warqad ka Alphabet German Waxaa lagu sharaxay mawduuceena cinwaan looga dhigay. Haddii aad rabto, asxaabta ayaa akhrin kara mowduucaas.
Ha sheegin wakhti gaaban
Ka dib markaad barato sida loo codsado saacadda Jarmalka, bal aynu eegno sida saacadaha loo sheego. (tusaale, 1, sida saacadda shanaad)
Wareysiyada rasmiga ah iyo waraaqaha (Formell) lambarrada u dhexeeya 12-24 ayaa loo isticmaalaa. (tusaale ahaan, sagaashan soddon saacadood saacadaha 20.00).
Formell (Offiziell) Waxay ku dhegtaa Jarmalka
Informell (Inoffiziell) Daawashada Jarmalka
Waxaa jira farqi u dhexeeya isticmaalka rasmiga ah iyo kan aan rasmiga ah ee saacadaha Jarmalka. aan rasmi ahayn isticmaalka waxaa loogu yeeraa, aan rasmiga ahayn loo yaqaan ama Inoffiziell u sheeg wejigiisa denir.dolayı saacadood informell ama saacadood odhan Inoffiziell waxaas oo kale marka aad ogtahay in hadalkii loo isticmaali rasmi nolol maalmeedka.
Sidoo kale, si rasmi ah u dheh ama daawee offiziell markaad wax yiraahdo rasmiga ah waxaad ogtahay inay tahay isticmaalka rasmiga ah ee nolosha, hay'adaha rasmiga ah, wararka, telefishanka, raadiyaha.
Xaaladdaas, saacadda Jarmalka waxaa loo isticmaalaa labadaba nolol maalmeedka Wargelinta Informell labadaba marka loo eego isticmaalka isticmaal rasmi ah ie Formell lazımdır.biz ugu horrayn marka la eego qiimeynta isticmaalka Formell siin doonaa tusaalayaal dhamaadka su'aasha ka dib markii barashada in la isticmaalo isticmaalka göreceğiz.ınformell informell isticmaalo nolol maalmeedka.
Ugu horreyntii, waxaynu ku bilaabaynaa adigoo sheegaya in saacadaha saxda ah ee Jarmalka.
Ha sheegin waqti buuxa Jarmal
Aynu tixgelinno saacadaha saxda ah marka hore. Si aad ula qabsato maadadan, waxaad u baahan tahay inaad lambarrada ku ogaato wadnaha.
Habka loo raaco saacadaha buuxa waa sida soo socota:
Es ist ...... Uhr.Tusaalooyinka Jarmalka ee Wakhtiga buuxa:
Waqtiga XNUMKA: Es ist fünf Uhr
Waqtiga XNUMKA: Es ist sieben Uhr
Waqtiga XNUMKA: Es ist acht Uhr
Waqtiga XNUMKA: Es ist neun Uhr
Waqtiga XNUMKA: Es ist zehn Uhr
Waqtiga XNUMKA: Es ist zwölf Uhr
Es ist fünf daawato
Es ist vier daawato
Es ist zehn daawato
Es ist elf daawato
saacad kow iyo toban
Way fududahay in la yiraahdo saacadaha saxda ah ee Jarmalka iyo marka laga soo tago tusaalayaasha aan kor ku soo sheegnay, aan u sheegno sawirka soo socda tusaale ahaan.
Ha oran Waqtiga Jarmalka
Haatan waxan eegnaa sida saacadaha nuska ah lagu sheego Jarmalka.
Ha sheegin Saacadaha Almancada
Jarmalka, saacadaha nuska ah waxaa lagu sheegaa iyadoo la raacayo qaabka.
Ha sheegin Saacadaha Saacadaha Jadwalka JarmalkaEs istbb +. (+ 1) ....
Haddii saacaddu ay tahay afar saacadood iyo nus saac, afarlaha dhibcood ma aha afartii, laakiin shanaad.
Ereyga Halb micnaheedu waa kala bar.
Aynu eegno tusaalooyinka soo socda.
Afar iyo badh saacadood: Es istbb fünf
Shan saacadood iyo badh: Es istbb sechs
Saacadda lixaad ee saqda dhexe: Es istbb sieben
Saacadba tobnaad: Es istbb elf
Lixdii iyo badh baa la dhaafay
Waa saacad badhkeed
Waa afartii iyo badhkii
Sagaalkii iyo badhkii
Waa toban iyo badh
Sideedii iyo badh ayay dhaaftay
Jarmalka, saacadaha nuska ah ayaa sidoo kale lagu sheegi karaa wadahadal maalinle ah oo u dhaxeeya dadweynaha, sida ku cad tusaalooyinka soo socda:
halb siiben: lix iyo badh
Halb acht: toddoba iyo badh
Halb elf: toban iyo badh
hal iyo badh: halb zwei
laba iyo badh: halb drei
Saddex iyo badh
Maxay muhiim u tahay halkan waa in ay tahay lagama maarmaan in la isticmaalo saacad kahor.
Hadda waxaan ku siin doonaa sawirro ah sida loo yiraahdo saacadaha Jarmalka.
Tusaalooyinka sawirku waxay sidoo kale ka caawinayaan mawduucan in la fahmi karo oo la xasuusto.
Ha sheegin Saacadaha Saacadaha Jadwalka Jarmalka
* Jarmal, ha ilaawin inaad hal ama badh aad sheegto saacad iyo badh ka hor.
Ha sheegin Saacadaha Jarmal ee Quarterly
In la yiraahdo saacadaha xiga ee jarmalka afar meelood meel ve waxaa jira rubuc laba marxaladood.
Waa ist Viertel nach ……………………………… ..
Qaababka aan kor ku soo sheegnay waxaa loo isticmaalaa in lagu sheego Jarmalka rubuc-saacadood.
Es ist Viertel nach …………………. hannaan “afar meelood meelWaxay ka dhigan tahay ”. Haddii rubuca saacaddu ka gudubto meesha barta looga tago oo madhan, tiradaas ayaa la keenayaa.
Es ist Viertel vor …………………. hannaan “waxaa jira rubucWaxay ka dhigan tahay ”. Tirada saacadaha waxaa loo keenayaa booska bidix ee banaan oo leh dhibic.
Dhanka kale, yeynaan ilaawin taas, saacadaha rubacyada Jarmalka iyagoo leh "quarter"Ereyga"quarterIyo xarafka ugu horreeya ee eraygan marwalba waa la weyneystaa.
Sidee loo dhahaa waqtiga Jarmalka waa rubac dhaafay?
Jarmalka waxaa la yiraahdaa waa afar jibbaar jumlad ah sida ku cad qaabka soo socda:
Ereyga kor ku xusan, ereyga nach macnihiisu waa "marayay". Haddii rubuca saacaddu dhaafto, nambarkaas waxaa la geynayaa meesha dhibcaha leh. Tusaale ahaan, haddii ay tahay rubuc 3 iyo XNUMX, markaa waa inaad ku qortaa "drei" aagga dhibcaha. Ereyga Viertel macnihiisu waa rubuc. Mawduuca waxaa sifiican loogu fahmi doonaa tusaalooyinka aan hadda bixin doono.
Waa ist Viertel nach vier
Waa afartii iyo afartii
Toddoba iyo toban rubuc
Saacaddu waa sagaal iyo toban rubuc
Waa ist Viertel nach elf
Waa tobankii iyo tobankii
Waa laba iyo tobankii rubuc
Labaatan iyo badh
Seddexdii bilood ee la soo dhaafay
Waa ist Viertel nach sechs
Tusaalooyinka kale ee saacadaha rubuc Jarmal:
Waqtigu waa shan meelood: Es ist Viertel nach fünf
Seddex jeer siddeedaad ayaa la soo dhaafay: Es ist Viertel nach acht
Saddex rubuc afar meelood meel: Es ist Viertel nir vier
Waa rubuc rubuc dhammaadkii: Es ist Viertel nach sieben
Quarter Jarmal Haa Sidee Kugu Soo Baxda?
Markaad sheegto saacadaha Jarmalka waxaad leedahay afar meelood meel ayaa lagu yiri sida lagu muujiyay qaabka soo socda:
Ereyga kor ku xusan, ereyga vor macnaheedu waa "jira, joog". Tirada rubuca saacadda ayaa la keenayaa barta dhibcaha. Tusaale ahaan, haddii ay rubuc tahay 4-ta saac, markaa afar, taasi waa, "vier" waa in lagu qoraa aagga dhibcaha leh. Ereyga Viertel macnihiisu waa rubuc. Mawduuca waxaa sifiican loogu fahmi doonaa tusaalooyinka aan hadda bixin doono.
Waa rubuc ilaa sagaal
Waa rubuc ilaa toban
Waa ist viertel vor elf
Waa rubuc ilaa kow iyo toban saac
Waa rubuc ilaa laba
Waa ist Viertel vor vier
Waa rubuc ilaa afar
Waa rubuc ilaa saddex
Waa afar iyo tobankii
Waa ist Viertel vor fünf
Waa rubuc ilaa shan
Es waa Viertel vor sechs
Waa rubuc ilaa lix
Waxaa jira afar meelood meel ilaa shan saacadood: Es ist Viertel vor fünf
Quarter ilaa rubuc: Es ist Viertel vor acht
Waxaa jira rubuc ka mid ah waqtiga: Es ist Viertel vor vier
Waxa jira afar meelood meel ilaa hal saac: Es ist Viertel vor sieben
Ha sheegin jadwalka jumlada ee jumlada
Jarmalka, daqiiqadaha ayaa la dejiyaa sida ku xusan tusaale ahaan.
Ha sheegin saacadda daqiiqadaha kor ku xusan Saacaddii ugu horeysay ee la cayimay waa daqiiqad, saacaddii labaad ee dhibcaha waa saacadda Waxaan ku soo dejin doonaa.
halkan ka hor macnaheedu waa eray-kala-dhigista iyo by Waxaan hadda soo sheegnay in erayga macnihiisu yahay gudbid.
Es ist nach .. nach ……………………… ..
Es ist v .. vor …………………………
In wasakhahaasi kor ku xusan by erey maraya, habeen Waxaa loola jeedaa, ka hor Hadduu eraygu yahay waxaa jira, kala Waxay ka dhigan tahay. Tusaale ahaan, in la dhaho saacad sidii ay shan saac tahay.byEreyga ”ayaa la adeegsaday. Inaad u sheegto saacad u eg shan saac,ka horEreyga ”ayaa la adeegsaday. Qaababka kor ku xusan, daqiiqada ayaa la keenayaa barta koowaad, saacadana waxaa la keenayaa barta labaad.. Ha iloobin tan gabi ahaanba. Haddii kale, waxaad sheegtaa waqtiga qaldan. Hadda aan aragno tusaalayaasheena ku dhahaya saacado iyo daqiiqado Jarmal.
Es ist fünf by zehn.
saacad un shan maraya
Es ist zehn by zwei
saacad laba on maraya
Es ist zwanzig by drei
saacad seddex ka mid ah labaatan maraya
Es ist fünfundzwanzig by vier
saacad afar ka mid ah shan iyo labaatan maraya
Es ist elf by sieben
saacad toddobo kow iyo toban maraya
Es ist zehn by fünf
saacad shan ka mid ah on maraya
Hadda aan tusaale u soo qaadanno saacadaha Jarmalka oo ah toban illaa shan saac.
Es ist fünf ka hor fünf
saacad ilaa shan shan waxaa jira
Es ist zehn ka hor drei
saacad ilaa saddex on waxaa jira
Es ist zwanzig ka hor acht
saacad ilaa sideed labaatan waxaa jira
Es ist acht ka hor zwei
saacad laba sideed waxaa jira
Es ist zehn ka hor vier
saacad afarta on waxaa jira
Es ist zwanzig ka hor sechs
saacad ilaa lix labaatan waxaa jira
Es ist zwanzig ka hor sieben
saacad ilaa toddobo labaatan waxaa jira
Haatan waxan tusaalooyin ka bixinnaa saacadaha Jarmalka ee labaduba joogaan iyo kuwa soo maray:
Labaatan saacadood oo la soo dhaafay: Es ist zwanzig nach drei
Waxaa jira labaatan iyo labaatan saacadood: Es ist zwanzig vor drei
Waa afartan iyo afartan nin oo ah afartan sheqel
Waxaa jira afartan iyo afartan camal ah: Es ist vierzig vor fünf
Es ist zehn nach zwei: Waqtiga waa laba ilaa toban
Es ist zwanzig nach drei: Labaatan saacadood oo la soo dhaafay
Es ist fünfundzwanzig nach fünf: shan iyo shan iyo labaatan shan
Es ist elf nach sieben: Waxay ahayd toddoba saac
Es ist fünf vor fünf: Waxaa jira shan saacadood shan saac
Es ist zehn vor vier: Waxaa jira 10kii saac ee tobnaad
Es ist zwanzig vor neun: Waxaa jira labaatan iyo sagaal saacadood
Es ist acht vor elf: Waxaa jira saacadda siddeed iyo tobnaad saacadda
Si aad u barato saacadaha Jarmalka, waa inaan sheegnaa inaan ku qasbanaaneyno inaanu hogaamino nambarka nambarka koowaad.
goobaha noo nambarka nambarka Waxaad sidoo kale xiri kartaa adoo wacaya:
Saacadaha Jarmalka Formell - Offiziell (Rasmiga) isagoo leh
Waxaan ku qabanay dhammaan muxaadarooyinka kor ku xusan qaabka loo isticmaalo nolol maalmeedka, iyadoo la iska indhatirayo nolosha rasmiga ah. Si kastaba ha noqotee, xaaladaha sida hadalka rasmiga ah iyo waraaqaha, saacadaha waxaa looga hadlaa 24 saac. Tusaale ahaan, markay tahay laba saac oo duhurnimo waxaa loo yaqaan afar iyo toban. Intaas waxaa sii dheer, foomka hoose waxaa loo isticmaalaa inta lagu jiro saacadaha rasmiga ah. Aan tusaalayaal yar ka siinno xaaladaha sidan oo kale ah:
Jarmal, saacadaha waxaa loo qoraa ama looga hadlaa sida soo socota raadiyaha, telefishanka, wararka iyo meelaha la midka ah.
Es ist ……………………. RDayaanna ………………………
Qaabka kor ku xusan, waxaan u keenaynaa saacadda meesha dhibcaha ugu horreysa, iyo daqiiqadda barta labaad ee dhibcaha.
Es ist zehn daawato zwanzig
saacad un labaatan maraya
Es ist drei daawato zehn
saacad seddex ka mid ah on maraya
Es ist sieben daawato vierzig
saacad toddoba Afartan (toddobo Afartan maraya)
6:50 : Es ist sechs daawato fünfzig
9:40 : Es ist neu daawato vierzig
22:55 : Es ist Zweiundzwanzig daawato fünfundfünfzig
Waqtiga Jarmalka 'Formell' - Tusaalooyin badan oo Offiziell (Rasmi ah) oranaya:
Es ist zehn Uhr zwanzig: Labaatan saacadood ayaa la soo dhaafay
Es ist acht Uhr fünfundzwanzig: Laba iyo shan saacadood sideed saac
Ugu dambeyntii, waxaan si xoog leh kugula talineynaa in aad sidoo kale baartid shay-baaga FORMELL - INFORMELL ours kuwaas oo laguugu diyaariyey hoos.
Weydiinta iyo Waqtiga ku dhahda Jarmal
Barashada Jarmalka Waxaan kuu rajeyneynaa dhammaan guulaha noloshaada.
Our koorso Jarmal ah oo cayn kasta su'aalo, faallo iyo talooyin almancax forums ama salka qaybta comments sugnaaday aad su'aalo yazabilirsiniz.almancax macallimiinta.
Waxaan rajeyneynaa guusha.
Tags: 10. fasalka nasiibka mawduuca, 10. saacadaha nasiibka fasalka, 9. fasalka nasiibka mawduuca, 9. saacadaha nasiibka fasalka, Ha sheegin saacadaha alman, saacadaha alaabta, Wie spät ist es